कोभिड हुँदा शरीरमा अक्सिजन तह कति हुनुपर्छ, कम भए के गर्ने ?
✍️: टिभी अन्नपूर्ण	 🕒 प्रकाशित: २०७८ बैशाख १५, बुधबार ०९:२४
अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अक्सिजन उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चले आपूर्तिमा समस्या नहुने तर सिलिन्डरको अभाव ‘ठूलै समस्या’का रूपमा देखा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।उनीहरूले विदेशबाट नयाँ सिलिन्डर ल्याउने व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
“पूर्वतयारी भएको हुन्थ्यो भने सरकार सरकारबीच सहमति गरेर द्रूत गतिमा ‘फास्ट ट्र्याक’बाट ल्याउने कुरामा सहजीकरण गरिदिनुपर्थ्यो। घर्किसक्यो समय। सिलिन्डर राज्यले एअरलिफ्ट गरेर ल्याउने हो भने कोभिडको विकराल समस्या पर्दा बिरामी बचाउन अवसर हुन्छ,” एक जना अक्सिजन उद्योग सञ्चालक शिवप्रसाद घिमिरेले भने।
“खरिद गरेर मात्रै पाउने अवस्था देखिन्न अहिले अक्सिजन सिलिन्डरका हकमा। कुनै विशेष किसिमको कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्ने देखिएर त्यसका लागि कामहरू अघि बढेका छन्,” डा. अधिकारीले भने।
“त्यसै कारण कोरोनाभाइरस पोजेटिभ हुनेबित्तिकै हामी बिरामीलाई शरीरमा अक्सिजनको तह नाप्न सिकाउँछौँ,” उनले भने।
“हामी दिनमा दुई-तीन पटक नाप्न सुझाउँछौँ ,” उनले भने।
चाप धेरै भएकाले सामान्य अवस्थाका कोभिड बिरामी समेत घरमै बसिरहेको विवरणहरू आइरहेका छन्। तर अक्सिजनको तह कम हुन लागेको अवस्थामा भने अस्पतालमै जानुपर्ने डा. सुवेदीको सुझाव छ।